Lahatsoratra nataon'i Ray Beharry momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Ray Beharry
Izaho dia liana amin'ny marketing, tetika, teknolojia, fitantarana ary fianarana mandritra ny androm-piainana. Ny mari-pamantarana ny asako dia ny mitondra ny majika amin'ny haitao amin'ireo mpihaino izay tsy nanaiky izany taloha. Hitako ny fomba miaina, manavaka, ary mampifandray ireo marika amin'ny alàlan'ny fitantarana ny tantaran'izy ireo amin'ny vanim-potoana niomerika. Amin'ny maha VP an'ny Marketing ahy, ny fahaizako mivelatra amin'ny paikady fandraharahana, ary ny fanatanterahana ny toeran'ny marika, ny sehatry ny fifandraisana, ny fahitan'ny mpanjifa ary ny dian'ny mpanjifa manerana ny nomerika sy ny sosialy.
Pollfish: Ahoana ny fomba hanaterana ireo fanadihadiana an-tserasera an-tserasera amin'ny alàlan'ny finday
Alahady, Martsa 5, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Ray Beharry
Namorona ny fanadihadiana momba ny tsena tonga lafatra ianao. Ankehitriny, ahoana no hizaranao ny fanadihadiana ary ahazoanao valiny statistika manan-danja haingana? 10% amin'ny fandaniana amin'ny fikarohana tsena 18.9 dolara eran-tany no laniana amin'ny fanadihadiana an-tserasera any Etazonia. Nandinika an'io fotoana io ianao mihoatra ny nandehananao tany amin'ny masinina kafe. Namorona fanontaniana momba ny fanadihadiana ianao, namorona ny valin'ny valiny rehetra – ary tonga lafatra aza ny filaharan'ny fanontaniana. Avy eo ianao dia nandinika ny fanadihadiana ary niova